Wararka - Si sax ah u aqoonsada dhowr cunto oo lagu daro
Xakamaynta Asiidh: macaan iyo dhanaan waa aniga
Si aad u hesho cunto leh midab, dhadhan, iyo dhadhan wanaagsan, dhadhanka cuntada waa lama huraan. Xakamaynta aashitadu waa nooc ka mid ah wakiilka dhadhanka, oo sidoo kale loo yaqaan wakiilka dhanaan. Ku -daridda walxaha dhanaan ee cuntada waxay dadka siin kartaa dhiirrigelin dhiirrigelin leh, waxay kordhisaa rabitaanka cuntada, waxayna yeelan kartaa saameyn jeermis -dile.
Waxay guud ahaan u qaybsan tahay inorganic acid iyo organic acid. Aaladda aan caadiga ahayn ee loo isticmaalo cuntada waa fosforic acid, iyo asiidhyada dabiiciga ah ee sida badan loo isticmaalo waa:citric acid, lactic acid, acetic acid, tartaric acid, malic acid, fumaric acid, ascorbic acid, gluconic acid, iwm.
Fosfooraska aashitadu wuxuu beddeli karaa citric acid iyo malic acid ee warshadaha cabitaanka, gaar ahaan sida wakiilka dhanaan ee cabbitaannada aan miraha ahayn halkaasoo citric acid aysan ku habboonayn. Waxaa loo adeegsan karaa sidii jaangooyaha pH ee warshadaha soosaarka, iyo sidii xal nafaqo khamiir leh warshad khamiir si kor loogu qaado kobaca unugyada unugyada. Waxaa sidoo kale loo adeegsan karaa isku -darka antioxidants -ka dufanka xoolaha, waxaana loo adeegsan karaa caddeynta dareeraha sukrose ee hannaanka soo -saarka sonkorta.
Citric acid waxay ku jirtaa unugyada dhirta iyo xoolaha iyo caanaha, iyo miraha liinta waxay leeyihiin waxyaabo ka sarreeya. Aashitada citric crystalline waa cad cad oo hufan ama budada crystalline cad. Citric acid oo ah fuuqbax waa kiristaalo aan midab lahayn ama budo cad, aan lahayn ur iyo dhadhan dhanaan. Citric acid waa wakiilka ugu badan ee isku dhafan. Waxay leedahay dareere sare leh iyo karti chelating xoog leh oo ions bir ah. Ka sokow in loo isticmaalo wakiilka dhanaan ee cuntooyinka, citric acid ayaa sidoo kale loo isticmaalaa ka -ilaaliye, isku -darka antioxidant, isku -hagaajiyeyaasha pH, iwm.
Lactic acid waxaa asal ahaan laga helay yogurt, sidaa darteed magaca. Cuntada lactic acid (50% waxa ku jira) waxaa loo adeegsan karaa sidii wakiil dhanaan ee cabitaannada fudud, cabitaannada yogurt -ka, khamriga la isku daray, khalka dardaraynta, suugo soy ah oo basbaas leh, qajaar, iwm. ee xawaashka, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin saamayn ka hortagga koritaanka bakteeriyada.
Malic acid waxaa ku jira tufaax, sidaa darteed magaca. Waxay leedahay dhadhan dhanaan oo jilicsan oo waara. Aragti ahaan, waxay gebi ahaan beddeli kartaa ama badiyaa beddeli kartaa citric acid loo isticmaalo cuntada iyo cabbitaanka. Xaaladda helitaanka saamayn isku mid ah, qiyaasta celcelis ahaan waa 8% -12% ka yar citric acid (jajab tiro). Gaar ahaan, aashitada malic waxaa loo adeegsadaa cuntooyinka dhadhanka dhadhan leh, cabbitaannada kaarboonka leh, iwm, kuwaas oo si wax ku ool ah u hagaajin kara dhadhanka miraha. Dalka Mareykanka, malic acid waxaa si joogto ah loogu isticmaalaa cuntooyinka cusub. Lacagta ugu badan waxay ku xiran tahay baahida wax -soo -saarka caadiga ah, ADI -na uma baahna xeerar gaar ah.
Ilaaliye: Afarta xilli ha ahaadaan kuwo nabdoon oo hore u korsada
Ilaaliyeyaasha, sida magacu tilmaamayo, waa waxyaabaha lagu daro cuntada oo loo isticmaalo in lagu ilaaliyo cuntooyinka burburaya sida khudaarta, miraha, iyo hilibka mid cusub. Sababtoo ah ilaaliyaha, sausage -ka ham, sausages, hilibka la kariyey ee qasacadaysan iyo cuntooyinka kale ee lagu iibiyo dukaanka weyn ayaa dhadhankooda hayn kara muddo dheer; ilaaliyaha dartiis, waxaan cuni karnaa masaafo dheer oo meelo kale laga soo raray sannadka oo dhan. Khudaarta iyo miraha cusub.
Ilaaliyeyaasha sida caadiga ah loo isticmaalo cuntada waxaa ka mid ah benzoic acid, butylhydroxyanisole iyo dibutylhydroxytoluene. Iyaga dhexdooda, butyl hydroxyanisole waa ka -ilaaliye wanaagsan, mana ku sumowdo xaddiga xaddidan ee caadiga ah. Qiyaasta ugu badan ee cuntada waa inaysan ka badnaan 0.2 g/kg marka la eego dufanka. Marka qiyaasteedu tahay 0.02%, waxay ka badan tahay 0.01%. Saamaynta antioxidant -ka waxaa kordhay 10%. Iyada oo ah antioxidant-dufanka leh, hydroxyanisole butylated ayaa ku habboon cuntooyinka saliidda leh iyo cuntooyinka dufanka ku badan. Sababtoo ah xasilloonida kuleylka ee wanaagsan, waxaa lagu isticmaali karaa xaaladaha shiilidda ama dubista.
Sanadihii la soo dhaafay, cilmi baarista ku saabsan waxyaalaha ilaaliya dabiiciga ah ayaa si weyn u soo jiitay saynisyahanno ka kala yimid adduunka oo dhan, tiro aad u badan oo ah alaabada ka -hortagga dabiiciga ah ayaa guud ahaan dadku soo dhoweeyaan, sida polyphenols shaaha, fitamiin E dabiici ah, polylysine iyo chitosan.
Marka laga hadlayo miraha aan ku iibsanno nolol maalmeedkeena, khubaradu waxay soo jeedinayaan in inta ganacsiyadu ay si sax ah u isticmaalaan waxyaabaha ilaaliya, macaamiisha ma aha inay ka walwalaan arrimaha amniga.
Ilaaliyeyaasha: kordhi cimriga rafcaanka cuntada
Ilaaliyeyaasha cuntada waxay horjoogsan karaan dhaqdhaqaaqa microbial -ka, waxay ka hortegi karaan cuntada inay xumaato oo ay xumaato, sidaasna ay ku fidiso nolosha raashinka. Inta badan cabitaannada iyo cuntooyinka baakadeysan waxay rabaan in la keydiyo waqti dheer, iyo waxyaabaha ilaaliya cuntada inta badan waa lagu daraa. Maaddaama ay la xiriirto caafimaadka dadka, waxyaabaha ilaaliya cuntada ayaa ah kuwa ugu xaddidan dhammaan noocyada ilaaliyayaasha.
dalkaygu wuxuu ansixiyay kaliya in ka badan 30 kaaryo-ilaaliye cunto oo la oggol yahay, kuwaas oo dhammaantood ah kuwo sunkoodu hooseeyo oo nabdoon. Kahor intaan loo oggolaan in la isticmaalo, waxay soo mareen tiro badan oo tijaabooyin cilmiyeed ah, oo ay ku jiraan quudinta xoolaha, sunta iyo tijaabooyinka sunta iyo aqoonsiga, waxaana la xaqiijiyay inaysan u geysan doonin jirka bini aadam waxyeello degdeg ah, subacute ama raagis ah.
Inta badan la isticmaalo waa benzoic acid, benzoate sodium, sorbic acid, sorbate potassium, kaalshiyamka propionate, iwm. Sanadihii la soo dhaafay, waxyaabaha ilaaliya cuntada ayaa bilaabay inay u horumaraan jihada nabdoonaanta, nafaqada, iyo wasakhda-la'aan. Waxyaalaha ilaaliya ee cusub sida gulukooska, oksaydase, protamine, lysozyme, bakteeriyada lactic acid, chitosan, badeecooyinka kala daadinta pectin, iwm. Waxaana loo oggolaaday isticmaalka gobolka.
Xaqiiqdii, ilaa inta kala -duwanaanta, tirada iyo baaxadda kaydinta cuntada ee ay adeegsadaan soo -saareyaasha cuntada si adag loogu xakameeyo baaxadda lagu qeexay heerka “Heerarka Fayadhowrka ee Adeegsiga Ku -darka Cuntada”, ma jiri doonto waxyeello u leh caafimaadka aadanaha, dadkuna waxay ku nasan karaan wax la cuni karo.
Tusaale ahaan, cuntooyinka lagu arko suuqa badiyaa waxaa ku jira waxyaalaha ilaaliya sida potassium sorbate iyo sodium benzoate. Labadan waxyaabood ee aad loo isticmaalo oo inta badan la isticmaalo ayaa guud ahaan ka soo baxa kaadida oo aan ku jirin jidhka ka dib markii uu liqay jidhka bini'aadamka. Urursada.
Haddii aysan jirin wax lagu daro cuntada
Haddii aysan jirin antioxidants-
Cuntooyinka saliidda leh, haddii ay yihiin duunyada dabiiciga ah iyo dufanka khudradda ah ama cuntooyinka shiilan, waxay sababi doonaan cuncun sababtoo ah oksaydhka muddo gaaban gudaheed. Soo -saarayaasha ayaa shiili kara oo iibin kara. Qaybiyayaashu waa inay cusboonaysiiyaan khaanaddooda maalin kasta. Macaamiisha ayaa lumiya dareenkooda amni. Gaadiidka cuntada fog fog ayaa sidoo kale noqon doona wax aan macquul ahayn.
Haddii aysan jirin diyaarinta enzim-
Cunnooyinka uumiga ah ee ay Shiinuhu cunaan ma noqon doonaan kuwo jilicsan oo macaan leh sida ay maanta yihiin. Dadka reer Yurub waxay cuni karaan oo kaliya roodhida adag sidii ay cuneen qarniyadii dhexe. Waxa kaliya ee dadka dhulka ku tiirsan ay yihiin aashitada caloosha iyo candhuufta.
Haddii aysan jirin humectant-
Sausageedka Ham, sausages, iyo hilibka la kariyey ee qasacadaysan ayaa ka tagi doona miiskayaga, sababtoo ah lumitaanka casiirka asalka ah inta lagu guda jiro hawsha ayaa ka dhigaysa mid dhadhamiya sida wax la calaliyo; kalluunka, haleyga iyo cuntooyinka kale ee badda ku jira ma qancin karaan rabitaanka dadka gudaha, sababtoo ah borotiinku wuxuu ku lumi doonaa habka kaydinta qabow. Soo -saaridda iyo barafka iyo luminta dhalaalku way sarreeyaan; waxa taas ka sii murugo badan in aan lumino fuuq -celin oo xitaa ma cuni karno baasto degdeg ah.
Haddii uusan jirin dejiye cunto-
Xagaaga kulul, jalaatada macaan ee aan jeclahay waxay ka buuxsami doontaa haraaga barafka qaboojiyaha. Waa wax laga xumaado in wax loo cuno sida barafka oo kale; waa wax laga xumaado in la iska tuuro; caanaha kookaha, caanaha casiirka khudradda, yogurt -ka la jeermi -yeelay, yogurt kala duwan oo la kiciyey, caano firfircoon, iwm Ma la cabbi karo, in kasta oo caanaha dhulka cawsku had iyo jeer la tuujiyo.
Haddii uusan jirin emulsifier——
Caanaha qariibka ah iyo ifafaalaha lakabka biyaha ayaa ka muuqda cabitaanno. Sonkorta ku jirta alaabta shukulaatada waa sahlan tahay in la qallajiyo, roodhida ma sahlana in la kaydiyo, margarine iyo cuntada qasacadaysan ayaa laga soocaa saliidda iyo biyaha, tubaakada iyo xanjada xummaduna way sahlan yihiin in la xoqo oo lagu dhejiyo ilkaha.
Haddii uusan jirin wakiil khamiir-
Cunnooyinkii uumiga ahaa ee reer waqooyigu jeclaa waxay ka cagajiidayaan inay quustaan, iyo keegga ay reer koonfurku jecel yihiin inay macsalaameeyaan. Dadka dalka oo dhan waa inay macsalaameeyaan ulaha cajiinka shiilan oo la cunay in ka badan 900 oo sano.
Marka la soo koobo, haddii aysan jirin wax lagu daro cuntada, ma jiri doonto warshado cunto casri ah oo aad u horumarsan, mana jiri doonto nolol casri ah oo tayo sare leh.
Xigasho: Maqaal uu qoray Cuntada Asal ahaan